China Basketball Medals fekitari uye vagadziri | Kingtai
Nyowani nyowani mikombe yebhasikiti ikozvino irimo mune yedu zviuru makumi mashanu zvemakumbo tsoka fekitori. Shora iyo slam dunk ine yepamusoro-soro, inodhura basketball mikombe kubva kuKingtai! Sarudza kubva pamhando dzakasiyana dzemabhasiketi, ese anouya aine emahara uye asingagumi engraving. Iyi mikombe inokwezva uye inodhura yemabhasiketi akakwana kukudza timu yako mwaka wakarwiwa zvakaoma kana kuti kuziva zvibudiriro zvakasarudzika zvevatambi vako.
Yedu sarudzo uye mutengo pane ese BASKETBALL MaMedhi anoita izvi SLAM DUNK! Iva nechivimbo chakawedzerwa chekubata neye mukurumbira wemubairo mugadziri nezviuru zvevatengi vanogutsikana! Tenga sarudzo yedu hombe yeMitambo yeBhasikiti uye Basketball Imbwa Matagi pazasi. Sarudza iwe menduru pazasi uye usakanganwa kutarisa HUGE basketball menduru huwandu hwezvishoma zvakanyorwa pasi pemufananidzo wemenduru! Isu tinotakurawo mamwe akawanda akasarudzika uye ekugadzira Basketball Medals & Trophies.
Hwemhando yebhasikiti mikombe, menduru uye tsika mibairo inowanikwa yekukurumidza kutumira chero kupi muUSA! EDCO yakazvipira kupa yakanakisa sarudzo yemakapu ebhasikiti ekucherechedzwa uye kukurudzira kwevatambi, makochi uye vanozvipira. Magadzirirwo edu anotora maziso anogadzirwa kubva kuzvinhu zvakanakisa uye kununura pahunhu uchigara pabhajeti! Tenga izvozvi uye uwane ruzivo rwepasi rese-vatengi, kukurumidza kuendesa uye kuchengetedza mutengo pamitero yega yega.
Pashure: BHASI DZEMAHARA
Zvadaro: MADZIMAI ANOBIKWA